टुंगो लाग्यो हटाइने मन्त्रीहरूको सुची, को - को परे ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more टुंगो लाग्यो हटाइने मन्त्रीहरूको सुची, को - को परे ?
टुंगो लाग्यो हटाइने मन्त्रीहरूको सुची, को – को परे ?
मंसिर ३ गते, २०७६ - ०९:५८
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा आफूहरूबीचकै कार्यविभाजनको विषय पनि उठेको छ । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे दुई अध्यक्षबीच लगभग सहमति जुटिसकेको छ ।
आजको कान्तिपुरमा खबर छ – दुई अध्यक्षबीचको भेटमा आफ्नातर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा समावेश हुने नयाँ मन्त्रीहरूबारे छलफल गरेको स्रोतले जनायो ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्नो पक्षबाट मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्नुपर्ने नेताहरूको नाम यसअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका छन् ।
एक नेताका अनुसार ओली र दाहाल कुन–कुन मन्त्री हटाउने भन्ने विषयमा लगभग टुंगोमा पुगे पनि कस–कसलाई ल्याउने भन्नेबारे अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन् । ‘पार्टीमा अवसर नपाएका योग्य नेताहरू धेरै हुनुहुन्छ, न्यायोचित ढंगले जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ, त्यसैले अध्यक्षद्वय गहन छलफलमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले भने । प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा ‘रेड जोन’ मा रहेका मन्त्रीलाई अब हटाउनैपर्छ भन्नेमा दुवै अध्यक्ष सहमत छन् ।
दाहालनिकट स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबाहेक अरू मन्त्रीहरूका बारेमा पुनर्विचार गर्न उनी तयार छन् । यी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि रुचाएका छन् । यस्तै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाएका अन्य मन्त्री हुन् ।
मंसिर ३ गते, २०७६ - ०९:५८ मा प्रकाशित